Buddhavani | Mahavani | प्रब्रजित भएर पनि आमा बुबाको सेवा गर्ने भिक्षु | |बुध्दबाणी
प्रब्रजित भएर पनि आमा बुबाको सेवा गर्ने भिक्षु
श्रावस्तीमा अठार करोडको धन सम्पत्ति भएको एक सेठका छोरा थिए । एक्लो छोरा भएकोले आमा बुबाले धेरै माया प्रेम गर्दथे । एक दिन, उनी घरको झ्यालमा बसिरहेको समयमा मानिसहरु हातमा पुष्प, धूप माला इत्यादि लिएर मानिसहरू बुद्धको धर्म उपदेश सुन्न जेतवन विहारमा जाँदै गरेको देखे। उसले सोच्यो, “म पनि जान्छु।“ उनी विहारमा पुष्प ,कपडा, पेय आदि ल्याएर बुद्धको पूजा गरे। त्यसपछि एक स्थानमा बसेर धर्म उपदेश सुने र बुद्धको उपदेश सुनेर सुख विलासका दोषहरू र प्रब्रज्याको महत्वलाई बुझे, अनि प्रब्रजित हुने मन लिएर बुद्धलाईलाई बिन्ती गरे। तथागतले आमाबाबुको अनुमति लिएर मात्र प्रब्रजित हुन सक्छ भनेर भन्नु भएपछि उनी घरमा गए र प्रब्रजित हुन हुन अनुमति मागे । तर एकलो छोरालाई प्रब्रजित हुन आमा बुबाले अनुमति दिएन । अनुमति नदिए पछि हप्तासम्म खाना नखाएर , रोएर बसेपछि अन्तमा उनलाई अभिभावकको अनुमति दियो ।
अभिभावकको अनुमति पछि उनले बुद्धसंग प्रब्रजया मागे । शास्तले एक भिक्षुलाई जिम्मा दिएर प्रब्रजित गराउनु भयो । उनी प्रब्रजित भएपछि उनलाई धेरै नै लाभसत्कारहरु पप्त भए । र आफ्ना आचार्य र उपाध्यायलाई प्रसन्न पारे र उपसम्पदा प्राप्त गरे। त्यसपछि उसले धेरै मेहनत गरेर धर्मको अभ्यास गरिरहे र सोच्यो, “यहाँ म भीडमा बसेर मैले धर्मको अभ्यास गर्न सक्दिन त्यसैले म एकान्त स्थानमा बसोबास गरेर ’विपश्यना’ को अभ्यास गर्ने छु भनेर आफ्ना आचार्यको अनुमति लिएर एकान्तमा बस्न गए । लिए। उनले गूरुबाट कमस्थान भएपछि बाह्र वर्षसम्म। निरन्तर परिश्रम गरिसकेपछि पनि उनले अर्हत मार्ग भने प्राप्त गर्न सकिएको थिएन।
समय बित्दै जाँदा उसका आमा बुबा भने गरीब भए । उनको खेतीपाती गर्र्ने र उनीहरूसँग व्यापार गर्नेहरुले परिवारमा बुढाबुडी मात्र रहेको थाहा भए पछि सबै सम्पत्ति लिएर भागे । घरका नोकर चाकरहरू पनि घरमा भएका सुन गरहना सबै लिएर भागे । यसरी सबै लुर्टि पछि उनीहरुको दरिद्र भएर भिख मागेर खान थाले ।
त्यस समयमा एउटा भिक्षु जेतावनबाट उनी बस्ने ठाउँमा पुगे। उनले आफ्नो आगन्तुकलाई अभिवादन गरे र आवश्यक सबै सेवा गरिसकेपछि सोधे, “उहाँ कहाँबाट आउनुभयो?“ जेतावनबाट जवाफ पाए। “त्यसपछि उनले शास्त र संघको कुशल समाचार सोधे, र आफ्ना अभिभावकहरुको अवस्थाको बारेमा सोध्ने मन गरे । भने
भन्ते ! श्रावस्तीमा फलानो सेठ परिवार सबै कुशल त छ हैन ?
आगन्तुक भिक्षुले भने ““ आयुष्मान! परिवारको अवस्थाको बारेमा नसोध्नुहोस्। ““ भन्ते!
“आयुष्मान! त्यस परिवारमा एक मात्र छोरा थिए। उनी (बुद्ध) शासनमा प्रब्रजित हुन आए । त्यसपछि उसले सबै कुरा गुमायो। अब दुबै भिक्षा माग्दै दुखद जीवन बिताउँदैछ“
यो सुन्नै बित्तिकै उसको आँखामा आँसु थाल्यो।
“आयुष्मान! उ किन रुँदै छ?“
उनले जवाफ दिए। तिनीहरू मेरा बाबुआमा हुन्। म उनकै छोरा हुँ। ““
आयुष्मान! तपाईंको आमा बुबाले तपाईंको कारण पीडा भोग्नु परयोे। उनीहरूको सेवा गर्नुहोस्।
“उनले सोचे,“ बाह्र बर्ष प्रयास गरे पनि मैले अर्हत मार्गलाई प्राप्त गर्न सकिन। म यसको लागि योग्य नहुन सक्छु। अब म प्रब्रजित भएर के गर्नु बरु घरमा गएर आमा बुबाको पालनपोषण गरेर म स्वर्ग जाने बाटो भए पनि बनाउँछु भनीसोच्दै उनले आफ्नो अरन्य निवासलाई त्यो स्थविरलाई हस्तान्तरण गरे र भोलिपल्ट बाहिर गए, र श्रावस्तीको नजिक क्रमशः जेतावनको पछाडिको विहार पुगे।
त्यहाँ दुईवटा मार्गहरू थिए। एक जना जेतवनख विहारमा जान्थे, अर्को श्रावस्तीमा। ऊ त्यहाँ उभिएर सोच्यो ( “सबैभन्दा पहिले मैले बाबुआमालाई देख्नु पर्छ कि दशबलवारी (बुद्ध) को?“ उसले सोच्यो ( “मैले धेरै समयदेखि अभिभावकलाई देखेको छैन, तर अब बुद्ध दर्शन यो पछि पछि दुर्लभ हुनेछ। त्यसैले पहिले बुद्धको दर्शन गरेर धर्म सुनेर मैले भोलि बिहान मेरा बाबुआमालाई भेट्ने छु, भनी सोचर उनी श्रावस्तीको मार्गबाट निस्के र बेलुका जेतवन आइपुगे,
त्यस दिन शास्तले आज कसको उद्धार गर्न सकिन्छ भनेर ध्यानदुष्टिले हुर्नु हुँदा त्यही भिक्षुलाई देख्नु भयो । तथागतले आफ्नो धर्मदेशनामा आफ्नो बाबुआमाको सेवा गर्नु राम्रो हो सेवा गर्नु पर्दछ भनी बाबुआमा सेवाको गुण वर्णन गर्नुभयो । बुद्धको उपदेश सुनेर, भिक्षुले सोचे ( “मैले गृहस्थी भएर मेरो आमाबुबाको हेरचाह गर्नेछु भनेर तर शास्ताले प्रब्रजित भएर पनि आमा बुबाको सेवा गर्न मिल्ने बताउनु भयो । आज बुको दर्शन गर्न नपाएको भए मैले प्रब्रजित जीवन च्याग गर्नु पर्ने थियो । अब म प्रब्रजित भएर नै आफ्नो आमा बुबाको सेवा गर्नेछु भनेर निर्णय गरे । अनि मात्र लिएर भिक्षा माग्न गए र उनलाई खिर भोज प्राप्त भयो ।
उनले बिहान श्रावस्तीमा प्रवेश गर्दा सोचे, “पहिले म खिर खाऔं वा आमा बुबालाई भेट्न जाऔं ?“ उसले सोच्यो, ’अहिले आमा बुबा गरिब हुनुहु न्छ खाली हातले जानु ठीक छैन। तसर्थ उहाँले खिर सहित आफ्नो पुरानो घरको ढोकामा आउनुभयो।
बाबुआमा भित्ताको छेउमा बसेर खिरको माग गर्दै थिए। उनलाई त्यो स्थितिमा बसिरहेको देखेर, उसको मुटु नै पोल्न थाल्यो र आँखाबाट आँसु बहन थाल्यो । तर उहाँले आफ्नो आमाबुबाले आँस नदेखोस भएर केही पर गए । आंसु पुछेर उनी आफ्ना आमा बुबाको अगाडी उभिए तर उहाँलाइ आमाबुबाले चिन्न सकेनन र भने आफ्नो आँसुको आँखाबाट केही टाढा टाढा उभिए। उहाँलाई हेरेर उनीहरूले चिनेनन । उनीहरुले भिक्षु भिक्षा माग्न आएको भनेर ठानेर भने “भन्ते! तिमीलाई दान दिन योग्य बस्तु हामीसंग छैन। अगाडि बढ्नुहोस।“ उनीहरुको कुरा सुनेर, उसको मुटु शोकले भरियो र उनी आँखाभरि आँसु लिएर उभिरहे । उनका बुबाले भिक्षुलाई नियाएर हेर्दा आफ्नो छोरा भनेर चिनेपछि तब उनका बुबाले आमालाई भने, “जाऊ, यो तिम्रो छोरो हो।” उनी उठिन् र आफ्नो छोरालाई चिनिन रउनको खुट्टामा लडेर रुन थालिन र उनका बुबाले पनि त्यरी नै रुन थाले । त्यो दृष्य अत्यन्ते मार्मिक थियो ।
उसले पनि अभिभावकलाई हेर्दै आँसु बगाउन थाल्यो किनकि ऊ आफैंले आफूलाई सम्हाल्न सकेन। त्यसपछि, शोकमाथि विजय हासिल गर्दै उनले आमाबुबालाई आश्वासन दिए, “चिन्ता नगर्नुहोस, म ख्याल राख्नेछु।“ तब उनले आफ्नो आमाबुबालाई आफुलाई प्राप्त भएको खिर ख्वाएर र एकछिन बसे र फेरि भिक्षाटनकोलागी निस्के ।र भिक्षाटनबाट प्राप्त खाना आमा बुबालाई खुवायो।
यसरी उसले आमा बुबाको सेवा गर्न थाल्यो । उनले भिक्षाटनमा प्राप्त भएका सबै खाना आमा आमाबुबालाइृ ख्वाउन्थे, बचे मात्र आफुले खाने गर्दथे , नभए भोकै बस्थे । आफुलाई प्राप्त भएको वस्त्र पनि आमा बुबालाई दिन्थे । आफुसंग भएको चिबरलाई टालेर भए पनि लगाउन थाले । यसरी दिनरात आमा बुबाको सेवा गर्दै जाँदा उनी कमजोर भएर दुब्लाउन थाले । उनको यो अवस्था देखेर उअन्य भिक्षुहरुले सोधे,
“आयुष्मान! पहिले तपाईको शरीरको सुन्दर थियो। अब यो पहैलो कालो भएको छ। तपाईलाई कुनै रोग लागेको छ?“
उनले भनिन, “आयुष्मान! मलाई यो रोग लागेको छैन, तर केही समस्याहरु छन् ।
“ भिक्षुहरुले भनिन्। “आयुष्मान! शास्ताले श्रद्धावानहरुले दिइएको चीजलाई बिर्र्गाु दिनु हुँदैर्न दिदैनन्। तपाईले श्रद्धालहरुले दिएको दान गृहस्थीहरुलाई दिनुहुन्छ, यो अनुचित कार्य हो । “
उनीहरुको कुरा उनी सुनेर लज्जित भएर उनले आफ्नो टाउको निहुराए।
तर भिक्षुहरु यति भनेर मात्र स. सन्तुष्ट भएन। उनीहरु गएर शास्तलाई गुनासो गरे, “भन्ते! फलानो भिक्षुले श्रद्धावानहरुले दिइएको चीजलाई अपमान हुने गरि गृहस्थीहरुलाई दिएर उनीहरुको सेवा गरिरहेका छन् ।
“शास्तले भिक्षुलाई बोलाएर सोधिन्।
“भिक्षु! के तिमीले आफुलाई प्राप्त भएको दान घरमा गएर गृहस्थीहरुलाई पालन पोषण गर्ने काम गर्नु हुन्छ ?“
भिक्षुले भने ः हो , भगवान
भगवान बुद्धले फेरि सोध्न्ुा भयो ः तिमीले कसलाई यसरी पालन पोाषण गरिरहेका छौं ?
भिक्षुले भने ः भगवन, आफ्नो आमा बुबाको । भिक्षुको उत्तर सुनेपछि बुद्धले उनलाई हौसला दिए, “साधु, साधु“ भन्नुहुँदै, “तिमी मेरो बाटोमा छौ। विगतको जीवनमा मैले अभिभावकको सेवा गरें।“ त्यसरी नै तिमीले गरयो भनेर प्रशंसा गर्नु भयो ।
शास्ताले भिक्षुहरुलाई श्रवण कुमार जातकको उपदेश दिनु भयो । कथाको अन्तमा आमा बुबाको सेवा गर्ने भिक्षुले श्रोतापत्ति फल प्राप्त गरे ।